Vaovao - Fampirantiana 18-20 Shanghai
Fampirantiana 18-20 Shanghai
Manatrika ny 18 i TAAfaha China Internationla Foundry Expo （Metal China） any Shanghai.
Adiresy: National Exhibition and Convention Center (Shanghai)
Ora: 18 aogositrafaha-20th, 2020
Metal + metallurgy Sina dia mampanan-karena sy manadio hatrany ny atin'ny fampirantiana. Miorina amin'ny fanariana tany am-boalohany, metallurgy, lafaoro indostrialy, marindrano marefo ary indostrialy, ny fampirantiana dia nanampy ny sehatry ny casting casting, metaly tsy misy ferrous ary bearings.
Tamin'ny fanandramana fanokafana ny taona 2020, ny olona sinoa misahana ny indostria fanoratana dia nanatri-maso sy nanoratra tantara. Ny ady amin'ny valanaretina sy ny famerenana ny asa sy ny famokarana dia nahatonga ny indostria iray manontolo fahaterahana indray.
Amin'ny maha-mpanome serivisy lehibe manerantany ny fitsaboana amin'ny alàlan'ny fitsaboana ambony, ny TAA Metal dia tsy matahotra ny valanaretina, voalamina tsara sy voalamina ary misy vokatra fampiratiana, ao anatin'izany milina fanapoahana tifitra mandeha ho azy, feno feno abrasives vy avo lenta, fitifirana masinina fitaovana famaohana, kodiarana fitotoana vy ary vokatra hafa.
Ny trano heva anay dia niahiahy mafy ny ankamaroan'ny mpanamboatra indostria sy ny haino aman-jery. Nandritra ny telo andro nisesy, nahitana vokatra marobe ireo mpitsidika sy fifampidinihana mafy.